Showing posts with label strange-news. Show all posts
သရဲခြောက်သောအိမ်ကြီးရှိအိမ်ရှင်အား အင်တာဗျုးသွားလုပ်သော သတင်းထောက် သရဲ၏ကုတ်ခြစ်ခံရဟုဆို
8/13/2014 12:43:00 PM strange-news
မှာရှိတဲ့ သရဲခြောက်တဲ့အိမ် တစ်အိမ်ကို အင်တာဗျူးသတင်းသွားယူတဲ့သတင်းထောက်
ရဲ့လက်ကို အဲဒီအိမ်က သရဲက ကုတ်ခြစ်
လိုက်တဲ့ အကြောင်း ဖောက်စ်၄၃ရုပ်သံလိုင်းကို ကိုးကားပြီး ဒေးလီးမေးလ်သတင်းစာကရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ကင်မရာမင်း နစ်ခ်ပက်ထရီလိုဟာ ဒင်းနာနဲ့သွမ်ဆင်ဆွမ်တို့လင်မယားနေထိုင်တဲ့ အဲဒီအိမ်ကိုရောက်သွားပြီး သူတို့သရဲခြောက်ခံရပုံကိုမေးမြန်းမှတ်တမ်းတင်လို့ မိနစ်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာ သူ့လက်ဖျံမှာအစင်းရာတစ်ခု ခြစ်ခံလိုက်ရပြီး လောင်ကျွမ်းသွားသလိုခံစားလိုက်ရကြောင်းပြောပါတယ်။
အဲဒီအိမ်မှာ (၇)နှစ်လောက်နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ ဒင်းနာသွမ်ဆင်တို့က သူတို့အိမ်မှာ သရဲအနည်းဆုံးငါးကောင်နဲ့ နတ်ဆိုး(၁)ကောင်တို့ရှိနေပြီး သူတို့ကိုအမြဲတမ်းနှောက်ယှက်နေကြောင်းပြောပြပါတယ်။အိမ်ထဲက မကောင်း ဆိုးဝါးကောင်တွေဟာ အိမ်ထဲကလူတွေကို ကုတ်ခြတ်တတ်လေ့ရှိတယ်လို့လဲသူတို့ကဆိုပါတယ်။
`ရှင်ကဒီသတင်းကိုရေးမှာဆိုတော့ သူ(သရဲကောင်)တွေက သတိပေးတာဖြစ်မှာပေါ့`လို့ဒင်းနာက ပြောပါတယ်။
နေ့တိုင်း အခြောက်အလှန့်ခံနေရတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။စခြောက်တဲ့နေ့ကတော့ သူ့အိပ်မက် ထဲမှာ ယောက်ျားနှစ်ယောက်က သူ့ဘေးရပ်နေတာမက်ပြီးလန့်နိုးလာတော့ အိပ်မက်ထဲက နှစ်ယောက် တကယ်ပဲအိပ်ရာဘေးလာရပ်နေတာတွေ့လိုက်ရတာကစတာပဲလို့ဆိုပါတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ်ကတော့ သူ မှန်ကြည့်နေတုန်း မှန်ထဲမှာ ဆံပင်အညိုရောင်နဲ့မိန်းကလေး လဲနေတာကိုမြင်လိုက်ရပြန်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။
အဲဒီသရဲတွေထဲက အချို့အမျိုးသမီးတွေက ကျွန်မတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အများ စုကတော့ အတော်ဆိုးသွမ်းကြတယ်လို့လဲ ဒင်းနာကပြောပါတယ်။
အခုထက်ထိဒီအိမ်ကိုဝယ်မယ့်သူလဲမတွေ့၊ပြီးတော့ အထက်လမ်းဆရာအမျိုးမျိုးပင့်ဖိတ်ပြီး သူတိ်ု့ကိုနှင်လို့ မရဖြစ်နေရတယ်လို့ အိမ်ရှင်လင်မယားကပြောဆိုတာကို ဒေးလီးမေးလ် နဲ့ဖောက်စ်ရုပ်သံတို့မှာဖော်ပြထား ပါတယ်။
(ဓါတ်ပုံများ- ၁။သရဲခြောက်သောအိမ်၊၂။ကုတ်ခြစ်ခံရသောသတင်းထောက်၊၃။အရပ် (၇)ပေရှိသော အရိပ်မည်း ကြီး၊၄။ အိမ်ပြင်တွင်ရိုက်သည့်ဓါတ်ပုံတွင် ထူးဆန်းအံ့သြဘွယ်ရာပေါ်လာသည့် စက်ဝန်းပုံသဏ္ဍန်ကြီး၊
Yangon Media Group အပြည့်အစုံသို့ »
ချစ်သူကို မတော်တဆဓားဖြင့် ထိုးသတ်မိခဲ့ပြီးမှ ဇာပနအခမ်းအနားတွင် ပြန်လည်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့
8/05/2014 09:09:00 AM strange-news
တဒင်္ဂအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ခံစားမှု ဒေါသအိုးကြောင့်နောက် ဆက်တွဲအကျိုးရလာဒ်က ပတ်ဝန်းကျင်လှုမှုဘ၀တွေမှာ ဘယ်လိုမှအစားထိုး လို့ မရနိုင်တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ သာမန်လူတွေမှာတော့ နေစဉ် နဲ့အမျှစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေ၊ လှုမှုဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အဆင်မပြေတဲ့ အခါမျိုး တွေဖြစ်လာလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဆိုးဆုံးဖြစ်ကတော့ ဒေါသကို မထိန်းလိုက်နိုင် ခဲ့လို့ မတော်တဆဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အရာတွေပါပဲ။
တောင်အာဖရိက သမီးရည်းစားတို့နှစ်ဦးတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးစိတ်အခန့်မသင့် စကားများ ကြရာမှ ကောင်လေးဖြစ်တဲ့ ကွာဇူလူနက်တယ်လ်က ကောင်မလေး လောင်းဝေးလ် နဲ့ ကောင်မလေးမိ ခင်ဖြစ်သူတို့ကို ဓားဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာထိုးခဲ့ရာမှ ချစ်သူကောင်မလေးက နေရာမှာပင်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ယင်းနောက် ဇာပနအခမ်းအနားမှာ သူရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ ပြန်လည်လက်ထက် ခွင့်တောင်းခံခဲ့ကာ သူရဲ့စိတ်ဒေါပြင်းထန်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်း သူ့ကောင်မလေးကိုတော့ တကယ်မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ချစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ အတွက်လက် ထပ်လိုကြောင်းဆိုပြီး သူ့ရဲ့ပြစ်မှုကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ ဇာပနအခမ်းအနားမှာ ကွာဇူလူက သူရဲ့ကောင်မလေးအုတ်ဂူ ရှေ့မှာ သူ့ရဲ့ဒေါသလက်လွတ်ဖြစ်မှုကြောင့် ဘယ်လိုမှ အစားထိုးလို့မရနိုင်တဲ့ဆုံးရှုံး မှုကြီးကြောင့် ငိုယိုတောင်းပန်နေကာ လက်ထပ်ခွင့်လည်းတောင်းနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အပြစ်တွေကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့တောင် အခွင့်အရေးမရှိတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူကို ကိုယ့်လက် နဲ့ပဲ အသက်ဆုံးရှုံးသွားအောင် လုပ်လိုက်တဲ့တာက တခြားပြစ်မှုတွေ ထက်တောင် ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းပါတယ်။
သူတို့သမီးရည်းစားသက်တမ်းကလည်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကိုတောင် ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မြို့တော် အီဗ်ကူဗူကီနီရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ ကောင်မလေး ဇာပနအခမ်းအနား မှာ မင်္ဂလာဆောင်သည်ဖြစ်စေ၊ မဆောင်သည်ဖြစ်စေ ညှာတာသောအားဖြင့် ကွာဇူလူ ကို စောင့်ကြည့်ထား မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဇာပနပြီးမှသာ သူ့ကို တရားဥပဒေအရ ဖမ်းဆီး အပြစ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူမရဲ့စိတ်ကူး အိပ်မက်အတိုင်း လက်ထပ်ပွဲကို ကျင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ လိင်ပြောင်းအမျိုးသမီး
7/25/2014 06:54:00 PM strange-news
အမျိုးသမီးအ၀တ်အစားဝတ်ဖျော်ဖြေရပြီး အသွင်ပြင်အရ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား မမှန်ကန်ပုံရတဲ့ Alexis Nicole Whitney အဖြစ်လူတွေသိကြတဲ့ Alexis Valerio ဆိုသူဟာ ပြီးခဲ့စနေနေ့က လက်ထပ်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Texas ပြည်နယ် San Antonio ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Valerio ဟာ သူမအဖေတစ်ယောက်လိုမှတ်ယူထားသူဖြစ်တဲ့ Chris Wilson ရဲ့လက်ကိုစွဲကိုင်ပြီး ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရဲ့အလယ်လျှောက်လမ်းအတိုင်း သတို့သားလောင်းရှိရာကို လျှောက်လှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
‘ဒါဟာ ကျွန်မထုတ်ဖေါ်ပြောတုန်းက (gay ဖြစ်ကြောင်း) ကျွန်မကိုတကယ့်ကို အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူပါ’ လို့အဲဒီ့ လိင်ပြောင်းအမျိုးသမီး Valerio က သူမ San Antonio အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀တုန်းကအကြောင်းကိုပြောပါတယ်။ Texas ရဲ့အမျိုးသမီးအ၀တ်အစားနဲ့ ရှေးခေတ်သမိုင်းဝင်အ၀တ်အစားဝတ်ဆင်ပြီး ဖျော်ဖြေတဲ့လောကမှာ ပုံမှန်ဖျော်ဖြေသူအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါးကျင်လည်ခဲ့တဲ့ Valerio ဟာသူမရဲ့သူတို့သား Frank Davis နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Houston မြို့မှာလက်ရှိနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
‘လက်ထပ်ပွဲတွေရဲ့တစ်ဝက်က gay လက်ထပ်ပွဲတွေပါ’ လို့ Grace Lutheran ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရဲ့ သင်းအုပ် Rev. Lura Groen ကသူမတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတဲ့ လက်ထပ်ပွဲတွေအကြောင်းပြောပါတယ်။ ‘နောက်တစ်ဝက်ကတော့ gay လက်ထပ်ပွဲတွေကျင်းပတဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ လက်ထပ်ချင်လို့ရောက်လာကြတဲ့ ပုံမှန် စုံတွဲတွေဖြစ်ပါတယ်’ လို့ Groen ကပြောပါတယ်။ ‘Grace Lutheran ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟာ လိင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုလက်ခံပါတယ်။ ကျွန်မတို့အတွက်တော့ဒါဟာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရမယ့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ကျွန်မတို့ကို ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းဘယ်လိုဖန်တီးထားတဲ့ဆိုတာ ပြသပေးပါတယ်’ လို့ Groen ကပြောသွားပါတယ်။
သူတို့သားအရံနဲ့သူတို့သမီးအရံပေါင်း ၁၅ ရောက်ရဲ့ရှေ့မှာရပ်ပြီး ရိုးရာလက်ထမ်ထိမ်းမြားမှုကတိက၀တ်တွေကို သူတို့နှစ်ဦးဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
‘ဒါဟာကျွန်မ ကလေးဘ၀ကအိပ်မက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်မအိပ်မက်မက်ပြီးလိုချင်ခဲ့တဲ့အရာပါ’ လို့ Valerio ကပြောပါတယ်။
Trend Myanmar အပြည့်အစုံသို့ »
အိန္ဒိယ လူငယ်တစ်ဦး၏ ပါးစပ်ထဲမှာ သွားအသေး (၂၃၂)ချောင်းကို ဆရာဝန်များ ဖယ်ရှားပေးခဲ့
7/25/2014 11:16:00 AM strange-news
အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များသည် (၇)နာရီကြာ Operation တစ်ရပ်အပြီးတွင် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တစ်ဦး၏ ပါးစပ်ထဲမှ သွားအသေး (၂၃၂)ချောင်းကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အသက်(၁၇)နှစ်ရှိ အေရှစ်ခ်ဂါဗိုင်သည် ၎င်း၏ ညာဘက်ပါးရိုး၌ ရောင်ကိုင်းနာကျင်နေခြင်းကြောင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များထံ လာရောက် ပြသခဲ့ကြောင်း မွမ်ဘိုင်းရှိ JJဆေးရုံ၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဌာန အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ ဆူနန်ဒါဒီဝါရီက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျေးရွာလေး တစ်ခုတွင် နေထိုင်သည့် အေရှစ်ခ်သည် ပါးရိုးမှ နာကျင်မှုကို (၁၈)လလုံးလုံး ခံစားခဲ့ရပြီးနောက် မတတ်သာသည့်အဆုံး မွမ်ဘိုင်းမြို့ပေါ် တက်လာကာ ဆေးရုံတွင် ပြသခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်း ဆရာဝန်များက အေရှစ်ခ်၏ ဝေဒနာကို အမျိုးအမည် မခွဲခြားနိုင်ခဲ့ချေ။
မွမ်ဘိုင်းတွင် စစ်ဆေးမှုများအရ အေရှစ်ခ်၏ ရောဂါသည် သွားအမြောက်အမြား စုဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်သည့် ရှားပါးလှသော ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ သွားအရေအတွက်သည် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် အရေအတွက်ထိ များပြားနေကြောင်း ဒေါက်တာ ဆူနန်ဒါက ဆိုသည်။
“အေရှစ်ခ် ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာက သွားတွေအများကြီး ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ရောဂါတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အကြိတ်တစ်ခုရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ဖောက်ပြန်သွားရာက အခုလို ဖြစ်လာတာပါ။ ပထမတော့ ကျွန်တော်တို့ သူ့ရဲ့သွား အပေါ်ယံမှာ ဖုံးနေတဲ့ အလွှာတွေကို ဖွင့်ထုတ်လို့ မရဘူး။ နောက်ဆုံး ဆောက်ရယ်၊ တူရယ်ကိုပါ သုံးပြီး ဖယ်ပစ်ရတယ်။ နောက်တော့ ပုလဲလုံးလေးတွေလိုမျိုး သွားလေးတွေကို တစ်ခုချင်း တွေ့လာရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒါတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖယ်ထုတ်ရတယ်။ ပုလဲအရိုင်းတုံး သေးသေးလေတွေလိုပဲ။ အဲဒီပုလဲတွေကို ဖယ်ထုတ်နေရင်း ကျွန်တော်တို့ပါ တော်တော် ပင်ပန်း နွမ်းနယ်လာတယ်။ စုစုပေါင်း သွားသေးသေးလေး (၂၃၂)ခုကို ကျွန်တော်တို့ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခဲ့တယ်”ဟု ဒေါက်တာ ဆူနန်ဒါက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇူလိုင်(၂၁)ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် Operationတွင် သွားဘက်ဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှစ်ဦးနှင့် လက်ထောက်နှစ်ဦးတို့က ကူညီခဲ့ရသည်။ အခြား သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာ ဒီဝါရီက အေရှစ်ခ်၏ ဖြစ်ရပ်သည် ရှားပါးလွန်းသည့် အခြေအနေ တစ်ရပ်ဟု ဆိုသည်။ “ကျွန်မရဲ့ လုပ်သက် နှစ်ပေါင်း(၃၀)ရှိပြီ။ တစ်ခါမှ ဒါမျိုးမကြုံဖူးဘူး။ ဆရာဝန် တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ ဒီကုသမှုဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အခြေအနေ တစ်ခုပါပဲ”ဟု ဒေါက်တာ ဒီဝါရီက မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
သူမက “ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းတွေ အရတော့ အပေါ်မေးရိုးမှာ သွားသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာလို့ (၃၇)ချောင်းထိ နုတ်ပေးခဲ့ရဖူးတဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အေရှစ်ခ်မှာတော့ အကြိတ်က မေးရိုးရဲ့ အတွင်းပိုင်း ခပ်နက်နက်ကို ရောက်နေတယ်။ အဲဒီမှာတင် သွားတွေ ရာနဲ့ချီ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲ”ဟုလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
အေရှစ်ခ်၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဆူရက်ရ်ှဂါဗိုင်က ၎င်း၏သားသည် ဆိုးရွားသည့် နာကျင်မှု ဝေဒနာကို လပေါင်းအတော်များများ ခံစားနေခဲ့ရကြောင်း ဆိုသည်။ “ကျွန်တော်လည်း ဆရာဝန်တချို့ဆီက အကြံယူခဲ့ပေမယ့် အဖြေရှာမတွေ့တာကြောင့် မကြံတတ်တော့ဘဲ သူ့ကို မွမ်ဘိုင်းမြို့ပေါ် ခေါ်လာတာပါ”ဟု ဆူရက်ရ်ှက ပြောကြားခဲ့သည်။
7 Day Daily အပြည့်အစုံသို့ »
လူ့သားရေနဲ့ ဖုံးထားတဲ့ စာအုပ်
7/23/2014 09:34:00 AM strange-news
ဒီစာအုပ်ကို သေချာစွာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပုံမှန်ပဲလား။ ကောင်းပြီ။ သေချာအောင် နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အကြောင်းကတော့ ဒီစာအုပ်ကို လူ့အရေပြား( လူသားရေ)နဲ့ ဖုံးထားလို့ပါပဲ။
မယုံမကြည် မဖြစ်ကြပါနဲ့။ ကမ္ဘာကျော် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ကိုယ်တိုင် ဒီစာအုပ်ကို ဖုံးထားတဲ့ အရာဟာ လူ့အရေအပြား ဖြစ်တယ်လို့ ချွင်းချက်မရှိ သက်သေထူထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ပြောရရင်တော့ စိတ်ဝေဒနာရှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ကျောဘက်က အရေပြားကို အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အမျိုးသမီးဟာ လေဖြတ်ပြီး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ သူမရဲ့ မိသားစုက သေချာစွာ ဖြေရှင်းချက် မပေးထားတာကြောင့် အခုလို မသေချာမရေရာတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ အဆိုပါ စာအုပ်ရှိရာ ဟားဗတ်စာကြည့်တိုက်မှ စာအုပ်ထိန်းသိမ်းသူ တစ်ဦးကပြောပါတယ်။
သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ စာအုပ်ဟာ ရာစုနှစ်များစွာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ Des destinees de l’ame လို့ အမည်ရတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဟာ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်များက စာအုပ်ဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်က ရာဇ၀တ်သားတွေရဲ့ အရေပြားနဲ့ စာအုပ်ဖုံးခြင်း ခေတ်စားနေတဲ့ ကာလဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ဖွယ် ရှိတဲ့ ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အလေ့အထကို anthropodermic bibliopegy လို့ ခေါ်ပြီး လူ့အရေပြားနဲ့ စာအုပ်ဖုံးခြင်းလို့ ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုချင်ပါတယ်။
အဆိုပါ စာအုပ်ကိုတော့ ပြင်သစ် ၀တ္တုစာရေးဆရာ Arsene Houssaye ရေးသားထာခြင်း ဖြစ်ပြီး လူ့စိတ်ဝိဉာဉ်များပေါ်မှာ တရားထိုင်ခြင်း အက်ဆေး ပေါင်းချုပ် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာတော့ စာရေးဆရာက ဘာကြောင့် အမျိုးသမီး အရေပြားနဲ့ စာအုပ်ကို ဖုံးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ရေးသားထားပါတယ်။
သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် အရေပြားပေါ်က ချွေးပေါက်လေးတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ခွဲခြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ စာရေးသူ Mr Houssaye ကရေးသားထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူတွေရဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ် အကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို ဖုံးဖို့အတွက် လူ့အရေပြားပဲ သုံးဖို့ သင့်တော်ပါလိမ့်မယ်လို့ ရေးထားပါသေးတယ်။
အခြား စာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုလည်း ထပ်မံ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး သိုးသားရေနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များဟာ peptide mass fingerprinting လို့ ခေါ်တဲ့ နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး အဆိုပါ စာအုပ်ဟာ လူ့အရေပြားကနေ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Credit: World Myanmar News အပြည့်အစုံသို့ »
7/23/2014 09:31:00 AM strange-news
Louis Denyer ဆိုသူဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့
အပြုအမူတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်မှာ ကြောင်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်
သူ့ကိုယ်သူ ကြောင်လူသားလို့ခေါ်တဲ့ ၂၉ နှစ်အရွယ် Louis ဟာတိရိစ္ဆာန်
မှတ်တမ်းဗီဒီယိုစီးရီးတွေကြည့်ပြီး ကြောင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်နည်းကို သင်ယူခဲ့တဲ့ Mr Denyer က ‘ကြောင်ကို နှေးနှေး မျက်တောင်မခတ်ပြခင်ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော်အလွယ်တ
ကူထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့နေပေးရပါတယ်။ ဆယ်ကြိမ်မှာ ကိုးကြိမ်သူတို့ မျက်တောင်ပြန်ခတ်ပြပါတယ်။
ဒါဟာ သူတို့ကသင့်ကိုယုံကြည်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်’ လို့ပြောပါတယ်။
‘ကျွန်တော်က ကြောင်တစ်ကောင်ရဲ့ပြသနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ဗဟုသုတရှိတယ်လို့ အလွန်ပဲယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ ဘယ်အရာကကြောင်တွေကိုသန်းတွယ်စေသလဲဆိုတာခင်ဗျားလေ့လာရပါမယ်’ လို့ပြောပါတယ်။
Denyer ဟာကြောင်တွေနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သူမတူတဲ့ဆက်နွယ်မှုက ပြသနာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကို ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။
သူကအခုအခါမှာ ကြောင်အပြုအမူဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူလုပ်ငန်းကိုထူထောင်ပြီး သူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
‘ကျွန်တော်က ကြောင်တွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုလုံးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ မမျှမတဆက်ဆံခံနေရတဲ့ကြောင်တွေ၊ အပြုအမူမှားယွင်းပြီး အပြစ်ပေးခံနေရတဲ့ကြောင်ပြသနာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ခံစားရပါတယ်’ လို့သူကပြောပါတယ်။
Treand Myanmar အပြည့်အစုံသို့ »
တစ်နှစ်ကျော်ကြာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သခင့်အိမ်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ခွေးကလေး
7/18/2014 07:32:00 AM strange-news
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီး အဖိုး၊ အဖွား နေထိုင်တဲ့ အိမ်မှာ ခွေးလေး တစ်ကောင် မွေးထား ပါတယ်။ သခင် နှစ်ဦးစလုံး ကွယ်လွန်သွားချိန် မှာတော့ အိမ်ကိုရောင်းချ ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေမယ့် ခွေးကလေးကိုတော့ မရောင်းခဲ့ ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အိမ်ရဲ့ အောက်ခြေ ကြမ်းပြင် ကိုပဲ အမိုးအကာ အဖြစ် သဘောထားလို့ နေထိုင် အသက်ရှင် ရပါတယ်။ အိမ်နီးနား ပတ်ဝန်းကျင်က စွန့်ပစ်တဲ့ အစားအသောက် အကျန် များကို စားသုံးလို့ အသက်ရှင်နေထိုင် ပါတယ်။ လေဒဏ်၊ မိုဒဏ် နဲ့ ရာသီ ဥတု ဒဏ် အမျိုးမျိုးကို ခံစားပြီး သခင် ရှိလိုရှိညား သော့ခတ် ထားတဲ့ တံခါး ပေါက်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ အသံပေးတ⁠တ် ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေလာတာ တစ်နှစ်ကျော် ကြာတဲ့ အချိန်မှာတော့ တိရစ္ဆာန် ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ တစ်ခုကို တွေ့ရှိ ခဲ့ပြီး သူ့ကို ကယ်တင် ခဲ့ ပါတယ်။
ကယ်တင်ပြီး ခွေးငယ်လေးကို အရင်လို လှလှပ⁠ပ လေး ဖြစ်အောင် ပြန်လည် ပြုစု ပြိုးထောင်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ခမ်း (ရိုးရာလေး) အပြည့်အစုံသို့ »
မင်းသမီးဖြစ်ချင်တဲ့ သမီးဖြစ်သူအတွက် နိုင်ငံသစ်ရှာဖွေ ပေးခဲ့တဲ့ဖခင်
7/15/2014 01:15:00 PM strange-news
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗာဂျီးနီးယား ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဟေတန်ဟာ သမီးဖြစ်သူရဲ့ ဆန္ဒကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဟေတန်ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ အသက်ခုနစ်နှစ် အရွယ်ရှိ အီမီလီဟာ မင်းသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။ ဟေတန်ဟာ ကလေးသုံးဦးရဲ့ ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သမီးဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ နိုင်ငံသစ်တစ်နိုင်ငံ ရှာဖွေမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟေတန်ဟာ အီဂျစ်နဲ့ ဆူဒန် ကြားထဲမှာရှိတဲ့ Bir Tawil အရပ်ဒေသမှာ နိုင်ငံသစ်တစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဒေသမှာ တောင်တန်းတွေနဲ့ ကန္တာရတွေကလွဲပြီး ဘာမှမရှိတဲ့အပြင် အကျယ်အ၀န်းကလည်း စတုရန်းမိုင် (၈၀၀) သာရှိပါတယ်။ ဒီနေရာကို အီဂျစ်နဲ့ ဆူဒန်တို့ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်နီးပါး အချုပ်အခြာအာဏာ ကင်းမဲ့နေတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာကို ဟေတန်က သွားရောက်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်အလံနဲ့ နိုင်ငံသစ်တစ်ခု တည်ထောင်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အလံကို ဟေတန်ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟေတန်ဟာ ယခုလအစောပိုင်း သမီးဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့မှာ မင်းသမီးတစ်ဦး ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ကတိပြုခဲ့တဲ့အတိုင်း သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟေတန်ဟာ အီဂျစ် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူပြီး အဲဒီဒေသကို သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ဟေတန်ရဲ့အပြုအမူဟာ တရားဝင်မှုမရှိဘဲ ကန့်ကွက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ သတိပေး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဟေတန်ကတော့ သူ့ရဲ့က လေးတွေ အတွက် လုပ်နိုင်သမျှ အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Messenger အပြည့်အစုံသို့ »
မိုးကြိုး အပစ်ခံရပေမယ့် အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ သားအမိ
7/15/2014 01:13:00 PM strange-news
ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ကလေးက သူ့အလိုအလျောက် ဆံပင် ထောင်နေခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။ ယမန်နှစ် ဇူလိုင်လက မိခင် ဖြစ်သူဟာ သမီးငယ်ကို ကိုယ်ဝန် လွယ်ထားစဉ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ နယူးမက္ကဆီမြို့မှာ မိုးကြိုး အပစ်ခံရ ပါတယ်။
နေ့ခင်း မိုးကြီး မုန်တိုင်း တိုက်နေချိန် အပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်ကို မိုးကြိုး ပစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မ စွာပဲ သူမဟာ အသက်ရှင်ခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကြီးမားတဲ့ ကံကတော့ သူမ လွယ်ထားတဲ့ ကိုယ်ဝန် ထဲက ကလေးငယ်ဟာ လည်း အသက်ရှင်ခဲ့ ပါတယ်။ မွေးဖွား ပြီးတော့ ယနေ့ အချိန် အထိ ထူးခြား တာ ကတော့ ပုံမှာ မြင်တွေ့ ရသလိုပဲ ဆံပင်ထောင်နေခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း နဲ့တော့ ယင်း ထောင်နေတဲ့ ဆံပင်ဟာ ပြန်ကျ လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ ၁၁ ဦးတည်းသော ကိုယ်ဝန်သည် များဟာ မိုးကြိုး အပစ်ခံ ရ သေးပြီး အသက်ရှင်သူ နည်းပါတယ်။ ယင်း ၁၁ ဦးထဲမှာ ၅ ဦး ကသာ ကလေးကို အသက်မသေပဲ မွေးဖွား ပေးနိုင်ခဲ့ တာမို့ ကမ္ဘာ့ ရှားပါး ဖြစ်စဉ် တစ်ခု အဖြစ် မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ ပါတယ်။
ငရဲ ဆိုတာ တကယ်ရှိပါတယ်လို့ သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေလိုချင်ရင် ဖတ်ကြည့်ပါ။
7/15/2014 03:22:00 AM strange-news
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ဆိုတာကို နော်ဝေးနိုင်ငံနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကအတည်ပြု၊ ကျနော်တို့ မြေကြီးရဲ့ မြေအောက်အလွှာတွင် ရွေ.လျှားမှုအကြောင်း လေ့လာကြတဲ့
ဆိုဗီယက်နိုင်ငံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များနှင့် ပြည်ပက ငှာရမ်းထားတဲ့ ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များရယ် ပူးပေါင်းပြီး…ဆိုဗီယက်နိုင်ငံ ဆိုက်ဗေးရီးယား နယ်စွန်တစ်နေရာတွင် မြေအောက်ဆိုက်စမစ် တူးဖော်နည်းနှင့် တူးခဲ့ကြပါတယ်။
ပိုက်လုံးတွေချပြီး တူးကြရင်းက မြေအောက် အနက်ကိုးမိုင် အရောက်မှာ ဇာတ်လမ်းက စတော့တာပဲ။ ပူးပေါင်းတွင်းတူး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆိုဗီယက် ဘူမိဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာ
ဒီမီထရီအက်ဇာကော့လို့ ခေါ်ပါတယ်။ တွင်းအနက် ကိုးမိုင်ရောက်တဲ့ အခါ တွင်းတူးတဲ့ပိုက်ဟာ ထိန်းမရအောင် တုန်ခါလာတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဘာကြောင့် တုန်ခါသလဲဟု စစ်ဆေးကြတဲ့အခါ
တွင်းတူးပိုက် ထိပ်ပိုင်းဟာ လေဟာနယ်လို တွင်းခေါင်းပြင်ကျယ်ကြီးတစ်ခုကို ရောက်နေလို့ထိမ်းမရအောင် လှုပ်ရမ်းနေခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ တွေ့ ရှိပါတယ်
အဲဒီအခါမှာတော့ လုံးဝမခံ မရပ်နိုင်အောင် နာကျင်တယ်လို့ အော်ဟစ်နေကြတဲ့ အသံကို စတင်ကြားရပါတယ်။
ပထမတော့ သူတို့ ရဲ့ တွင်းတူးစက်နဲ့ ပိုက်လုံးတွေနဲ့ မြေလွှာတွေရဲ့ တုန်ခါမှုအသံဟု ထင်မှတ်ထားကြပေမဲ့ သေချာစူစမ်းပြီး နားထောင်တဲ့ အခါမှာတော့ ပိုက်လုံးတစ်လျှောက်ထဲမှာ ကြားနေ
ရတယ် အသံတွေ ဖြစ်တာကြောင့် နားတွေတောင် မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဒေါက်တာ ဒီမီထရီအက်ဇာကော့က ဆိုပါတယ်။ သေချာအောင်လို အသံဖမ်းစက်ကို တွင်းထဲချပြီး
အသံဖမ်း နားထောင်တဲ့ အခါမှာတော့ မခံမရပ်နိုင်အောင် အော်ဟစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသံကို သဲသဲကွဲကွဲ စတင်ကြားလိုက် ရတယ်။ အဲဒီအသံနဲ့အတူ လူပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ
သို့ မဟုတ် သန်းပေါင်းများစွာရဲ့ အော်ဟစ်ငြီးငြူနေကြတဲ့ အသံကိုလဲ ကြားလိုက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါက်တာ ဒီမီထရီအက်ဇာကော့ အပါအဝင် တခြားပညာရှင်တွေရော..တွင်းတူး လုပ်သားတွေပါ အံ့သြတုန်လှုပ်မှုများစွာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအသံတွေကို အလွန်ဆွဲအားကောင်းတဲ့ အသံဖမ်းစက်တွေနဲ့ 
အသံကူးထားလိုက်ပြီး လုပ်ငန်းကို ဆက်မလုပ်တော့ပဲ တွင်းပေါက်ကို အဖုံးဖုံးပြီး ပိတ်ထားလိုက်ကြတယ်။
ဒါဟာငရဲကို တွေ့ ရှိခြင်းလို့ သူတို့ ခံယူထားလိုက်ကြတယ်။ အနိဌာရုံတွေနဲ့လူ လောကကို ဆက်ပေးလိုက်ကြပြီးလို့ ထင်မိပါတယ်။
ကျနော်အခု ခင်ဗျားတို့ကို ပြောပြနေတဲ့ ဟာတွေက တွင်းတူးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ဒီမီထရီအက်ဇာကော့နဲ့တွင်းတူးအဖွဲ့ ဝင် နော်ဝေးနိုင်ငံ ဘူမိဗေဒပညာရှင် ဘာနီနန်မီဒယ် အသက် ၆၅ နှစ်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေပါပဲ။
ဒီသတင်းတွေကို ဖင်လန်နိုင်ငံက အင်မန်နုဆက်စတီးယားဆိုတဲ့ လစဉ်ထုတ် စာစောင်က ရေးသားဖော်ပြကြတယ်။
ဒီကျနော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့အောက် ကိုးမိုင်မှာ သိပ်ကို ပူလောင်တယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ အခုကျနော်တို့ ရောက်နေတဲ့ ပူအိုက်စွတ်စိုတဲ့ တောဟာ ဖာရင်ဟိုက် အပူချိန်ဒီဂရီ ကိုးဆယ့်ငါးလောက်ပဲ ရှိတယ်။ မြေကြီးအောက်
်ကိုးမိုင်အကွာက အပူချိန် ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် 2000 ရှိတယ်လို့ တွက်ချက် သိရှိရတယ် ။
သူတို့ မူလခန့်မှန်းထားတဲ့ အပူချိန်ထက် ဆယ်ဆလောက်တောင် များနေတယ်လို့ တွင်းတူးအဖွဲ့ဝင်နော်ဝေးနိုင်ငံ ဘူမိဗေဒပညာရှင် ဘာနီနန်မီဒယ်က ဆိုပါတယ်။
တွင်းတူးအဖွဲ့ဝင် နော်ဝေးနိုင်ငံ ဘူမိဗေဒပညာရှင် ဘာနီနန်မီဒယ်နှင့် ဘူမိဗေဒပညာရှိချုပ်တို့ဟာ နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးနှင့် အောင်မြင် ကျော်ကြားမှု အရှိဆုံး အော့ဘရမ်းဘတ်စတိုက်ကီး ဆိုတဲ့ သတင်းစာကြီးက
1990ခု ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်။
ဘာနီနန်မီဒယ် ပြောတာတွေကို သတင်းစာမှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီသတင်းစာမှာတော့…
ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့အောက် ကိုးမိုင်းအကွာမှာ ငရဲပြည်ဆိုတာ တကယ်ရှိနေပြီ၊ တွင်းတူးတွေ့ရှိချက်အရ ငရဲပြည်ရဲ့ ဂိတ်ပေါက်တံခါးဝပဲဟု ရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုတွေ့ရှိမှုတွေပြီးတဲ့နောက်မှာ နော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့
ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်တချို့..အလုပ်က နှုတ်ထွက်လိုက်ကြတယ်လို့ သတင်းစာတွေမှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ ကြတယ်။
အမှန်တစ်ကယ် ဖြစ်ရပ်က သူတို့ ငှားရမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသား အားလုံးကို တွေ့ ရှိချက် အပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွင် မထားတော့ပဲ ပြည်ပကို ပြန်ပို့လိုက်ကြပြီး အလုပ်ကနှုတ်ထွက် ခိုင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီသတင်းကို ကြားတဲ့အခါမှာ ဆိုဗီယက် အာဏာပိုင်တွေဟာ လာဒ်ထိုးမှုတစ်ခုနှင့် ဖြေရှင်းလိုက်ကြတယ်။
ဆိုဗီယက် သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ယောက်က တစ်ဦးချင်းကို ငွေပေးပြီးနှုတ်ပိတ်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ငွေဘယ်လောက် ဆိုတာကိုတော့ တွင်းတူးအဖွဲ့ဝင် နော်ဝေးနိုင်ငံ ဘူမိဗေဒပညာရှင် ဘာနီနန်မီဒယ်ကို မေးလို့ မရခဲ့ပါဘူး။ ခန့်မှန်းရသလောက် ကတော့ တစ်ဦးစီကို သိန်းဂဏန်းလောက်
ပေးပုံရတယ်လို့မီဒီယာသမားတွေက ထင်မြင်ချင်ဖြင့် ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာနီနန်မီဒယ် ကတော့ သူရရှိတဲ့ ငွေတွေကို တပြားတချပ်မှ မယူပဲ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို
လှူဒါန်းလိုက်တယ်လို သိရပါတယ်။ ဒီသတင်း ပေါက်ကြားတဲ့ အခါမှာတော့ သူ့အသက်လဲ ဆိုးရိမ်ရပါတယ်ဟုလဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆိုဗီယက် အာဏာပိုင်တွေဟာ ထိုငြီးငြူသံတွေကို
နောက်စာတစ်စောင်ကတော့ နော်ဝေးနိုင်ငံသား အေ့(ချ)ရန်ဒါလန်ဂျူနီယာ ဆိုတဲ့ လူရေးခဲ့တဲ့စာပါပဲ။
သူဟာ နော်ဝေးနိုင်ငံ တရားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရဲ့ အထူးအတိုင်ပင်ခံ တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်တယ်။
စာရေးတဲ့ နေ့စွဲက ၁၉၉၀ခု ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့သူ့ စာထဲမှာ ရေးခဲ့တာကတော့ ၁၉၈၉ ခု ခရစ်စမတ် ရုံးပိတ်ရက်မှာ သူက အမေရီကန်နိုင်ငံ ကားလီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ကို အလည်အပတ် ရောက်နေချိန်မှာ
နော်ဝေးနိုင်ငံက ဆိုက်စမစ် ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေဟာ တွင်းတူးရင်းနဲ့ ဟောင်းလောင်းပေါက် ဟင်းလင်းပြင်ကို တွေ့ရပြီး လူထောင်းပေါင်း များစွာရဲ့ အော်ဟစ်သံကို ကြားရကြောင်း သတင်းစာကို
ဖတ်ရတယ်။ ဒီသတင်းစာကို ဟာသဆိုပြီး ပြက်ရယ်ပြုခဲ့ပါသေးတယ်ဟု ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မကြာပါဘူး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးထားတဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံမှ စာတန်းကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အခါမှာတော့ သူဟာ အရမ်းအံ့သြတုန်လှုပ် သွားမိပါကြောင်းနှင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့ ကို ဘုရားသခင်ထံမှာ
အပ်နှံကြောင်းနှင့် လုံခြုံတဲ့နေရာမှာ ထားပေးကြပါလို့ရေးသားထားကြောင်းသိရပါတယ်။
မှတ်ချက်( ၂၀၁၀ တုန်းက ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ မဖတ်မိ၊ မမှတ်မိတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ၊ ယုံကြည်ခြင်း မယုံကြည်ခြင်းက မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် သာ သက်ဆိုင်ပါကြောင်း)
မူရင်း သတင်းကို ဖော်ပြထားတာတွေက
Express Times အပြည့်အစုံသို့ »
7/14/2014 08:30:00 AM strange-news
မသန်စွမ်း ဘ၀ကို ရောက်နေပေမယ့် ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးခဲ့တဲ့ အသက် (၂၃) နှစ် အရွယ် နီကိုးလ်ကယ်လီဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အိုင်အိုဝါ ပြည်နယ်ရဲ့ အလှ မယ်ဆုကို ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ နီကိုးလ်ကယ်လီဟာ အခြားပြိုင်ပွဲဝင် များစွာကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ၂၀၁၄ အလှမယ် ချန်ပီယံဆုကို ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးရာပါ လက်တစ်ဖက် ပါဝင် ခြင်းမရှိခဲ့ပေမယ့် တက္ကသိုလ်မှာ စီမံခန့်ခွဲ ဘာသာရပ်နဲ့ ဘွဲ့ရယူထားတဲ့ နီကိုးလ် ကယ်လီဟာ ဘ၀တူ မသန်စွမ်းသူတွေ အတွက် လေးစားအားကျစရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ယုံကြည်မှုထားလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ နီး ကိုးလ်ကယ်လီ ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ နယူးယောခ်မြို့မှာ အခြေချပြီး လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။
နီကိုးလ်ကယ်လီက ကျွန်မဟာ အလုပ်တစ်ခု လုပ်တိုင်း ချိန်ဆတွေးတော လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။ အရာအားလုံးကို ကြိုးစားလုပ်ခဲ့လို့ ဘေ့ဘောကစားခြင်းကနေ ကခုန်ခြင်း၊ ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်းအထိ ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်မအနေ နဲ့ ဘာမှမကြိုးစားရင် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ နီကိုးလ် ကယ်လီဟာ မသန်စွမ်းသင်တန်ကျောင်းတွေကို သွားရောက်ပြီး သူနဲ့ဘ၀ တူတွေကို အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ နီကိုးလ်ကယ်လီက မသန်စွမ်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ မိဘတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရန် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင် ရာထိခိုက်မှုမရှိစေရေး အတွက် မိဘတွေကို သတိပေးမှုတွေ ပြုလုပ် သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ နီကိုးလ်ကယ်လီဟာ အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့ချိန်မှာပဲ နှလုံးရောဂါဖြစ်လို့ မေ့လဲသွားခဲ့သည့် ဆယ်ကျော်သက်ချစ်သူကို အနမ်းဖြင့် အသက်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သူလေး
7/12/2014 08:43:00 AM strange-news
Zach Selby လို့ အမည်ရတဲ့ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လေးဟာ သူနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Chloe Tones အသက် ၁၆ နှစ်တို့ဟာ ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့တဲ့ အချိန်မှာ ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန်လေးဖြစ်ဖို့ အတွက် စိစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။
အလွန်းချောမောလွန်းတဲ့ ကျောင်းသူလေးဟာ သူ့ရဲ့ ချစ်သူအသစ်ဖြစ်တဲ့ Zach Selby ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲ ကောင်လေးဟာ Heart Attack လို့ခေါ်တဲ့ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်လို့ ကောင်လေးကို ရှေ့ဦးသူနာပြုနည်းအတိုင်း ပါစပ်ချင်းကပ်ကာ လေကို မှုတ်သွင်းကာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို လေပြန်လည် လည်ပတ်စေပြီး ကယ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါကို သူမက KISS OF LIFE လို့ နာမည်ပေးခဲံပါတယ်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ Lincolnshire ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ South Kesteven မှာရှိတဲ့ Woolsthorpe မှာ ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန်တွေ့ဆုံဖို့အတွက် အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် Zach Selby ဟာ ၁၆ နှစ်အရွယ် သူရဲ့ ချစ်သူလေးဖြစ်တဲ့ Chloe Tones နဲ့ ချိန်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးဟာ ရှေ့ဦးသူနာပြုစုနည်းကို တက်မြောက်ထားခြင်း မရှိပေမယ့် မြေပြင်ပေါ်မှာ သတိလက်လွတ်မေ့မျောနေတဲ့ သူရဲ့ကောင်လေးကို CPR နည်းနဲ့ အသက်ကို ကယ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူနာတင်ယဉ်က ၀န်ထမ်းက ဖုန်းထဲကနေပြီး Chloe ကို ပါစပ်ချင်းကပ်ကာ mouth to mouth နည်းဖြင့် အသက်ကယ်ဖို့အတွက် မိနစ် ၄၀ နီးပါးအထိ သူတို့ဆီကို ဆေးဘက်အကူတွေ မရောက်ခင် ပြုစုခဲ့ရပါတယ်။
Zach ဟာ သိပ်ပြီး မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့ ဆံပင်ညှပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Granthan ဆေးရုံကို တင်လိုက်ရပါတယ်။ ဆရာဝန်က အကြောင်းစုံကို မေးတော့ သူက သူ့ရဲ့ ချစ်သူအသစ်လေးက သူ့ရဲ့ အသက်ကို ကယ်လိုက်တာပါလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
မိကျောင်းခေါင်းရှည်နဲ့ လက်ထပ်တဲ့ မြို့တော်ဝန်
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့ တံငါမြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ San Pedro Huamelula မြို့လေးရဲ့ မြို့တော်ဝန် Joel Vasquez ဟာ ရေငံ မိကျောင်းခေါင်းရှည်မ တစ်ကောင်နဲ့ မနေ့က လက်ထပ်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
လက်ထပ်ပွဲမကျင်းပမီ အဖြူရောင်သတို့သမီး ၀တ်စုံဆင်မြန်းထားတဲ့ မိကျောင်းမကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ လူအုပ်ကြီးဟာ မြို့တွင်းမှာ လှည့်လှည်ခဲ့ ပါတယ်။
” ဒီလို ငယ်ရွယ်တဲ့ မင်းသမီးနဲ့ လက်ထပ်ရတာဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဆန္ဒမှန်ပါ ” လို့ သတို့သားဖြစ်တဲ့ မြို့တော်ဝန်က မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာ ပြောကြားခဲ့ပြီး သတို့သမီးကို သူလက်မောင်းပေါ်တင်ပြီး ပြခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကုန်ကျစရီတ်ကို ဒေသကောင်စီက ကျခံခဲပြီး ဒီအခမ်းအနားဟာ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း နဲ့ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေတဲ့ ဒီဒေသရဲ့ ရိုးရာအစဉ်အလာတစ်ရပ် အဖြစ် ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒီလိုမျိုး ရိုးရာမင်္ဂလာအခမ်းအနားပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အဲဒီဒေသမှာ ငါးပုဇွန်တွေ ပိုမိုဖမ်းဆီးရမိနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref : Sky News
နှစ် ၇၀ ကြာ အစာမစား၊ရေမသောက်ဘဲ အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယအဖိုးအို
7/11/2014 09:21:00 AM strange-news
အစားအစာနဲ့ ရေဆိုတာ အသက်ဇီဝအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်လို့ ယူဆထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက် ၈၂ နှစ်အရွယ် Prahlad Jani ဆိုသူ အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားအဖိုးအိုဟာ ဒီ လက်ခံယူဆထားချက်ကို မှားယွင်းကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးအိုဟာ သူ့ ဘ၀ရဲ့ နှစ် ၇၀ လုံး အစာမစား၊ရေမသောက်ဘဲ အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့တာပါ။
သူဟာ အသက် ၇ နှစ်အရွယ်မှာ အိမ်ကို စွန့် ခွာခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Rajasthan ပြည်နယ်မှာ သူတော်စင် တစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဖိုးအိုဟာ နတ်ဘုရားမတစ်ပါးက သူ့ ရဲ့ ခံတွင်းထဲ ကို နတ်သက်ရှည်ဆေး လောင်းချခဲ့ပြီး သူ့ ကို မစခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
ဒီအဖိုးအို ဟာ နာမ်ဝိဥာဉ်သက်သက် နေထိုင်နိုင်တဲ့ အာဟာရသိဒ္ဓိပြီးတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ် ပြည်သူတွေက မှတ်ယူနေကြပါတယ်။ ဒီအဖိုးအိုရဲ့ ပြောကြားချက်ကို သဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ပြောကြားတဲ့ လူတွေကို အထူးပြုလေ့လာမှုပြုလုပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယဆရာဝန်တစ်ဦးက ထောက်ခံချက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ချို့ လူတွေကတော့ သူ့ ကို လူလိမ် တစ်ယောက်အဖြစ် ပစ်ပယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။
Mr.Prahlad ကို Ahemdabad မှာ ရှိတဲ့ ဆေးရုံတစ်ရုံမှာ သီးခြားခွဲထားခဲ့ပြီး အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးသုတေသနပြု အဖွဲ့ အစည်းက အနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ အစည်းဟာ ဒရုန်းလေယာဉ်တွေ၊ ကုန်းတွင်းပစ် ဒုံးကျည်တွေနဲ့ ဗုံးအမျိုးအစားအသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ ရဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ စစ်သားတွေကို စားနပ်ရိက္ခာမရှိဘဲ အချိန်ကြာအသက်ရှင်နေနိုင်ဖုိ့ကူညီလမ်းပြပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပြီး သဘာဝဘေးသင့်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လည်း အကူအညီ ရောက်မလာခင် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ သင်ကြားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဇီဝကမ္မဗေဒ နှင့် ပေါင်းစပ်သိပ္ပံပညာ ကာကွယ်ရေးဌာနအဖွဲ့ ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ G Ilavazhagan က တကယ်လို့ သာ ဒီအဖိုးအိုရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကိုသာ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ဆေးသိပ္ပံပညာသမိုင်း မှာ အကြီးဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး လူတွေကို အသက်ကြာကြာနေထိုင်ဖို့ လမ်းပြနိုင်မှာဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Mr.Prahlad ကို လေ့လာနေစဉ်အတွင်းမှာတော့ သူဟာ စမ်းသပ်မှုကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့ပြီး ခြောက်ရက်ဆက်တိုက် ဘာမှမစားခဲ့သလို၊ ဘာအရည်ကိုမှလည်း သောက်သုံးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Mr.Prahlad ဟာ အဲဒီ့အချိန် အတွင်းမှာ ဆီးဝမ်းသွားခြင်းလည်း မရှိခဲ့သလို မောပန်းနွမ်းနယ်အားပြတ်တဲ့ အရိပ်အယောင်တွေလည်း မရှိခဲ့တာကို အံ့သြဖွယ်ရာတွေ့ မြင်ရပါတယ်။
သူ့ ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်က မေးမြန်းစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ Sudhir Shah အရ Mr.Prahlad ဟာ အစာရေစာ မရှိဘဲနဲ့ ဆယ်ရက်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ဆီးအိမ်အတွင်း ဖြစ်လာတဲ့ ဆီးတွေကို သူ့ ခန္ဓာကိုယ်က အလိုအလျောက် ပြန်လည်စုပ်ယူသွားပုံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆယ်ရက်နောက်ဆုံးမှာ သူ့ ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်သာ အနည်းငယ်လျော့ကျခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ ဂျိန်းနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှစ်ရက်ကြာ အစာမစားဘဲ ဥပုသ်စောင့်တဲ့ အလေ့အထတစ်ခုရှိပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျအချက်တွေအရတော့ လူအများစုဟာ ရက် ၅၀ ကြာ အစာမစားဘဲ အသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှု တစ်ခုဟာလည်း ၇၄ ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
World Myanmar News (www.world-myanmar.com)
Credit: Trend Myanmar အပြည့်အစုံသို့ »
ဧရာမ ဥကြီး တစ်လုံး အင်္ဂလန်မှာ တွေ့ရှိ
7/10/2014 01:44:00 PM strange-news
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Essex ပြည်နယ်၊ Halstead မြို့ရှိ Holy Trinity အမည်ရ ကျောင်း တစ်ခုမှာ ထူးခြား ကြီးမားတဲ့ ဥတစ်လုံးကို တွေ့ရှိကြောင်း သိရ ပါတယ်။
ကျောင်း ဝိုင်းတွင်းက တစ်နေရာမှာ တွေ့ရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥဟာ တမင် ကောလ ဟလ လွင့်ခြင်း မဟုတ်ပဲ မြင်နေကျ အကောင် များရဲ့ ဥ နဲ့ အခွံတူ ပါတယ်။ လေ့လာ သူတို့ရဲ့ စမ်းသပ်ချက် အရလည်း ယင်းဟာ သတ္တဝါ တစ်ကောင်ကောင် ရဲ့ ဥ ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံ ယူဆ ထားပါတယ်တဲ့။ အရွယ် အစား ကတော့ ရေအိုးစင် တစ်လုံးစာ ရှိပါတယ်။ ၃ ပေ ပတ်လည် အချင်း ရှိတဲ့ ဥ ဖြစ်ပါတယ်။
အလေးချိန် ကတော့ မသိရ ပါဘူး။ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၂၅၀ ကျော်က မြင်တွေ့ ခဲ့ရပြီး ဆရာ ဖြစ်သူကို သတင်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးမျုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ဆိုပါတယ်။ သတင်းကို Metro.co.uk မှာ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။
အောင်ခမ်း (www.innewsmyanmar.com) အပြည့်အစုံသို့ »
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေ ကျွေးတဲ့ အစားအစာတွေ တစ်လ စားသုံးမယ့်သူ
7/09/2014 06:51:00 PM strange-news
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ၀ါရှင်တန် မှာနေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေ ကျွေးမယ့် အစားအစာတွေကို တစ်လတိတိ စားသုံး သွားမယ်လို့ ကြုံးဝါးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အမည်က ဒိုရိုတီဟန့်တားဖြစ်ပြီး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ ခွေး၊ ကြောင်တို့ စားသုံးတဲ့ အစားအစာဟာ လူသားတွေ စားသုံးတဲ့ အစားအစာလို အာဟာရနဲ့ အရသာရှိတာကို ပြသလိုတာမို့ အခုလို ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန့်တားဟာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေ ရောင်းချတဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ဆိုင်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်အစာတွေကိုသာ ရောင်းချကြောင်း သက်သေပြလိုတာမို့ တိရိစ္ဆာန်တွေ ကျွေး တဲ့ အစားအစာကို ရက် (၃၀) စားဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟန့်တားဟာ သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ (၁၉)ရက် မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟန့်တားဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေကို ကျွေးမွေးတဲ့ အစားအစာတွေကို ရောင်းချရာမှာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုစေမယ့် အချက်ကို အဓိကထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဟန့်တားက သူ့ရဲ့ အပြုအမူဟာ ရူးသွပ်စရာလို့ ထင်မှတ်စရာ ဖြစ်ပေမယ့် တိရိစ္ဆာန်တွေစားတဲ့ အစားအစာနဲ့ လူသားတွေစားတဲ့ အစားအစာကို အတူတူ သတ်မှတ်ထားတာမို့ ပြဿနာမရှိကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Credit: messenger အပြည့်အစုံသို့ »
ဝမ်းနည်းနေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကြောင်ပေါက်လေး နာမည်ကြီးလာ
7/09/2014 11:55:00 AM strange-news
စိတ်ဆိုးနေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ Grumpy Cat ကိုတော့ အတော် များများ သိကြ ပါတယ်။ ယခု ရက်ပိုင်းတင်ပဲ အင်တာနက်မှာ ရေပန်း စားလာ ပြန်တာ ကတော့ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကြောင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အမည်တော့ မပေးရ သေးပါဘူး။ လောလောဆယ် ကတော့ သူ့ကို အလွယ် အားဖြင့် purrrmanently sad cat လို့ ခေါ် ပါတယ်။
ပိုင်ရှင်က Ashley Herring ဖြစ်ပြီး Imgur ဆိုတဲ့ ဆိုရှယ်ဆိုဒ် တစ်ခုမှာ တင်လိုက်တော့ ရက်ပိုင်း အတွင်းပဲ ကြည့်ရှုသူ လေးသိန်း နီးပါး ရှိသွား ပါတယ်။ ကြောင်ရဲ့ မျက်နှာအသွင်အပြင်က ဝမ်းနည်း နေသလို ပေါက်နေ ပေ မယ့် အမှန်တော သူက ဝမ်းနည်းနေတာ မဟုတ် ပါဘူး။ နဂိုမူလ ကိုက မျက်နှာထား ပုံစံက အဲ့ဒီလို ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝေဝေ မျက်လုံး၊ ငိုတော့မယ့် နှုတ်ခမ်း အနေအထား တို့ကြောင့် ချစ်စဖွယ် ပုံစံ တစ်မျိုး ပါပဲ။
သူ့ကို ပိုင်ရှင်ဟာ အကောင်းဆုံး ကျွေးမွေး ပြုစု ထားပြီး အင်မတန်လည်း ချစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ အိပ်နေချိန်တောင် စောင်ထဲထိ တိုးဝေ့ပြီး သခင့်ကို ပွတ်သီးပွတ်သပ် လာလုပ်လေ့ ရှိကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဂရုစိုက်မှုကို အင်မတန် ကြိုက်နှစ် သက်တဲ့ ကြောင်မလေး ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရင်သားဗလာနဲ့ပုံတွေကို အွန်လိုင်းကနေ ငွေနဲ့ ရောင်းချပြီး အပိုဝင်ငွေရှာ
7/09/2014 08:49:00 AM strange-news
အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့Debbie Delamar ဟာ သူမရဲ့ပင်ကိုယ် ကြီးမားပြီးသား ၃၀HH အရွယ်အစားရှိတဲ့ရင်သားနှစ်မွှာကို အလွန် ကိုကြီးမားတဲ့ ၃၀KK အရွယ်ထိ ပိုမို ကြီးမားလာအောင် ပေါင်ငွေ ၈၀၀၀ ခန့် သုံးစွဲ ခွဲစိတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေတဲ့အကြီးဆုံး ရင်သားပိုင်ရှင် ဖြစ်လာပါတယ်။သူမရဲ့ ရင်သားထဲကို ထည့်ထားတဲ့ အသားစဟာ အလေးချိန် ၇ ပေါင်ခန့် ရှိပြီး ဆီလီကွန်သတ္တုကတော့ ၅ ပိုင့်စာရှိပါတယ်။
တပ်မတော်သား၏ ဇနီးတစ်ဦးဖြစ်သူ Debbie Delamar ဟာ သူမရဲ့ လတ်တလော ရင်သားအသစ်ကြောင်း ပြောရာမှာ သူမမှာ နဂိုမူလ ၃၀DD အရွယ်ရှိ ကြီးမားတဲ့ ရင်သားပမာဏ ရှိပေမယ့်လည်း “ ကျွန်မကတော ကျွန်မရင်သားတွေကို ကြီးနိုင်သလောက်ကြီးကြီးပဲ လိုချင်ပါတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။အရပ် ၅ ပေခန့် သာရှိတဲ့ မစ္စ Delamar ဟာ သူမရဲ့ ရင်သားကို လက်ဖက်ရည် ပန်ကန်လုံး ၄ လုံးစာ ပမာဏ ထပ်ပေါင်းထည့်ပြီး ၃၀HH အရွယ်အစားထိရရှိအောင် လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ခန့့် က စတင်ခွဲစိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူမဟာ ဒါနဲ့ တင် မကျေနပ်နိုင်သေးတာကြောင့် နောက်ထပ် လက်ဖက်ရည်ပန်ကန်လုံး ၃လုံးစာပမာဏ ထပ်ပေါင်းထည့်ရင်း ၃၀KK အရွယ်အစားထိ ပိုမိုကြီးမားလာအောင် ခွဲစိတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ သူမအတွက်တော့ ယင်းခွဲစိတ်မှုကို ခံယူပြီးကတည်းက ဘ၀က အစဉ်ချောမွေ့ နေခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမဟာ သူမရဲ့ ရင်သားအရွယ်အစားကြီးမားတာကြောင့် လက်ခုပ်တောင်တီးဖို့ အဆင်မပြေတော့ပဲ သူမအလုပ်လုပ်ရတဲ့ ကားအစိတ်အပိုင်းတွေ တပ်ဆင်တဲ့ စက်ရုံမှာ စီတန်းတပ်ဆင်မှုတွေလုပ်တဲ့ အလုပ်သမားအစီအတန်း ကနေ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ထိုင်နေရတာ တွေကြောင့်ပါ။
“ ကျွန်မ ဘယ်နေရာသွားသွား လူတွေက ကျွန်မကို စူးစိုက်ကြည့်ကြတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ကျေနပ်ပါတယ်။ ကျွန်မက ဒီလိုပြုပြင် ဖန်တီးလို့ ရတဲ့ အသွင်အပြင်ကို သဘောကျပြီး ကျွန်မကတော့ကြီးနိုင်သလောက် ကြီးကြီးပဲလိုချင်ပါတယ်” လို့ သူမက သတင်းစာတစ်ခုကို ပြောပါတယ်။
“ ကျွန်မက သမားရိုးကျ စစ်မှုထမ်းရဲ့ ဇနီးသည်၊ မိခင်တစ်ယောက်မဟုတ်တာ ကျွန်မသိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျွန်မက ဘယ်သူကိုမှ ထိခိုက်၊နစ်နာအောင် လုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး”
“ကျွန်မက ပြုပြင် ဖန်တီးလို့ ရတဲ့ အသွင်အပြင်ကို နှစ်သက်တာကြောင့် သက်သက်ရယ်ပါ။လူတစ်ချို့ က ရွှေရောင်သမ်းတဲ့ ဆံပင်တွေ ဒါမှမဟုတ် အနက်ရောင်ရှိတဲ့ ဆံပင်တွေကို သဘောကျသလိုပဲ ကျွန်မက ဖန်တီးပြုပြင်လို့ ရလာတဲ့ ရင်သားခပ်ကြီးကြီးတွေကို သဘောကျတယ်လေ။"
“ဗြိတိန်မှာ ရင်သားအကြီးဆုံး ဖြစ်လာဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တော့ ကျွန်မမှာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒိလိုပဲ သူဟာသူ ဖြစ်သွားတာပါ” လို့ သူမက ဆက်ပြောပါတယ်။
“ အခုတော့ ကျွန်မက ဒီရင်သားတွေနဲ့ နေသားကျသွားတာကြောင့် ကျွန်မအတွက် သိပ်ပြီး အနေရအထိုင်ရ မခက်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မပထမဆုံး အနေရခက်တဲ့ ပြဿနာ စဖြစ်ခဲ့တာက ကျွန်မ သမီးတွေနဲ့တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှ ရောက်နေခဲ့တဲ့ အချိန်ပေါ့။ ကျွန်မ လက်ခုပ်တီးဖို့ လုပ်တော့ ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့တာ ရိပ်စားမိသွားတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။
သူမဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိနေတဲ့ အားပေးသူတွေကို သူမရဲ့ ရင်သားဗလာပုံတွေကို လူမှုကွန်ယက် ၀က်ဘ်ဆိုက်များကနေ တစ်ပုံကို ပေါင်ငွေ ၃၅ ပေါင်နဲ့ ရောင်းချပြီး အပိုဝင်ငွေရှာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မစ္စ Delamar ဟာ သူမရဲ့ လတ်တလော ကျော်ကြားလာမှု အကြောင်းပြောဆိုရမှာ “ ကျွန်မက လူတွေအာရုံစိုက်ခံရတာကို စိတ်မပူတော့ပါဘူး။ကျွန်မ အသားကျနေပါပြီ”
“ ကျွန်မဟာ အ၀တ်အစား မလုံ့ တစ်လုံနဲ့ အဖော်အချွတ် ပုံတွေရိုက်တဲ့မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ကျွန်မကို အားပေးသူတွေက အွန်လိုင်းမှာ ရှာဖွေတွေ့ ရှိပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဒီလိုလေးပဲ ဖြစ်သွားတာပါပဲ”
“ကျွန်မဆီလာတဲ့ တုန့် ပြန်မှုကတော့ ကွဲပြားပါတယ်။တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတွေက လျှောက်ကြည့်ကြမယ်။ပြီးရင် သူတို့ တွေ့ သွားတာကို ထပ်ပြီး ပြန်ကြည့်မယ်။”
“ ကျွန်မက တော့ ဆိုးရွားတဲ့စံပြ မိခင်တစ်ဦးလို့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ မထင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ က တာဝန်ယူတတ်တဲ့ စိတ်ရှိတဲ့မိဘတွေပါ။ကျွန်မက အဖော်အချွတ်ဓာတ်ပုံ မော်ဒယ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ဘယ်တော့မှ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ဒီထက်တော့ပိုပျော်ရွှင် ကျေနပ်ခဲ့ရမှာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။”လို့ သူက ပြောပါတယ်။
လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်နေစဉ် ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သည့် ရှားရှားပါးပါး မင်္ဂလာ အလှဓာတ်ပုံများ
7/09/2014 08:36:00 AM strange-news
လက်ထပ်ပြီးစ စုံတွဲများအတွက် အမှတ်တရ မင်္ဂလာ အလှဓာတ်ပုံများကို ရှုခင်းကောင်းကောင်းဖြင့် ရွေးချယ်ရိုက်ကူးကြသည်မှာ အဆန်းမဟုတ်ချေ။ သို့သော်လည်း ကနေဒါနိုင်ငံမှ စုံတွဲတစ်တွဲ၏ ကျေးလက်ရှုခင်းနောက်ခံ မင်္ဂလာစုံတွဲ အလှဓာတ်ပုံများမှာမူ လေဆင်နှာမောင်း တစ်ခုကြောင့် သမားရိုးကျ အခြေအနေနှင့် များစွာ ခြားနားကွဲထွက်သွားခဲ့သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံမှ စုံတွဲသည် ဓာတ်ပုံဆရာမ ကောလင်းနစ္စကာ၏ အကူအညီဖြင့် ဆက်စ်ကက်ချီဝန်ရှိ လယ်ကွင်းများအနီးမှ ဖြတ်သန်းသွားသည့် ကျောက်ခင်းလမ်းပေါ်တွင် သဘာဝကျကျ ရှုခင်းနောက်ခံ အလှဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင်ပင် လေဆင်နှာမောင်းတစ်ခု စတင်စုဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို နစ္စကာက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အစပိုင်းက ရိုက်ကွင်းနေရာ ပြောင်းသင့် မပြောင်းသင့် ပြန်လည်စဉ်းစားခဲ့သော်လည်း ဓာတ်ပုံဆရာမ၏ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ယင်းစုံတွဲကလည်း လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်နေသည့် နောက်ခံပုံရိပ်ဖြင့် မင်္ဂလာ အလှဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်တွင်မူ နစ္စကာက အဆိုပါ ဓာတ်ပုံများကို သူမ၏ Facebook ပေါ်တွင် လွှင့်တင်ခဲ့ပြီး “ဒီလိုနေ့မျိုး ကြုံဖို့ကို ကျွန်မ အိပ်မက်နေခဲ့တာပါ။ ဒီဓာတ်ပုံတွေကို ပြသဖို့ မစောင့်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဘဝမှာတော့ ဒါမျိုး တစ်ကြိမ်လောက်ပဲ ကြုံနိုင်မယ်ဆိုတာ သိပ်ကိုသေချာပါတယ်”ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
ပြာလွင်သော ကောင်းကင်ယံ နောက်ခံတွင် ဖြူဖျော့ဖျော့ လေဆင်နှာမောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေသော ပုံရိပ်မှာ မင်္ဂလာစုံတွဲ အလှဓာတ်ပုံတွင် လိုက်ဖက်ညီစွာ ပေါင်းစပ် လှပနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်(၅)ရက်က ယင်းဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆက်စ်ကက်ချီဝန်တွင် ထိုနေ့က လေဆင်နှာမောင်း နှစ်ခု ဖြစ်ပေါ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး အဆောက်အအုံအချို့ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်။
7day daily အပြည့်အစုံသို့ »
ရည်းစားဟောင်းကို ၁မီလီယံ ငွေသား နဲ့ပေါက်ပြီး တုံ့ပြန်ခဲ့သူ
7/08/2014 12:29:00 PM strange-news
တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ သူနာပြုဆရာမကို တရုတ်ယွမ်ငွေ ၁ မီလီယံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ 161,270.44) နဲ့ ပေါက်ခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသားတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းက ရေပန်းစားနေပါတယ်။
ဆေးရုံကြမ်းပြင်မှ ပြန့်ကျဲနေသော ငွေသားများ
အကြောင်းစုံကတော့ အဆိုပါ အမျိုးသားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဟာဘင်ဆေးရုံမှ သူနာပြုဆရာမတို့ဟာ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပေမယ့် လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီး ယခုလက်ရှိတွဲနေတဲ့ ချစ်သူအသစ်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားထံကနေ BMW ကားအသစ်တစ်ဦးကို သူနာပြုဆရာမ လက်ခံခဲ့တဲ့အတွက် သူမကို ၁ မီလီယံ တန်ဖိုးရှိ ငွေသားတွေနဲ့ ချစ်သူဟောင်းက ပေါက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူနာပြုနဲ့ အဖိုးတန် လက်ဆောင်ပေးသူ ချစ်သူအမျိုးသား
Reports Online သတင်းများအရ အဆိုပါ ချစ်သူဟောင်းနဲ့ သူနာပြုတို့ကို အရေးပေါ်အခန်းရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ အော်ဟစ် ရန်ဖြစ်နေကြတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ဘာတွေ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်ကြတယ် သေသေချာချာ မသိရဘဲ ပိုက်ဆံတွေ ကြမ်းပြင်ပေါ် ပြန့်ကျဲနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အစောင့်တွေကတော့ သူတို့နှစ်ဦးကို ဖျန်ဖြေနိုင်ခဲ့ကြပြီး အများစုကတော့ သူနာပြုကို ငွေနဲ့ပေါက်ခဲ့ကြတာလို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
သူမနှင့် BMW ကားအသစ်
World Myanmar News
sgstomp အပြည့်အစုံသို့ »
Home နောက်စာမျက်နှာ »